Zeziphi iimpawu zeZodiac ezinethamsanqa eluthandweni kwaye ezingezizo? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Uthando lolunye, ukuba ayisiyiyo eyona nto intle emhlabeni, kodwa oko akuthethi ukuba ayintsonkothanga! Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kutyhila okuninzi malunga nobuntu bakho, kubandakanya nethamsanqa onalo xa kufikwa ekufumaneni umntu okhethekileyo. Ke, ngaba wakha wazibuza ukuba kutheni ungatshatanga ngonaphakade, kodwa awukwazi ukuqonda ukuba kutheni? Ewe, impendulo inokuba sezinkwenkwezini. Ewe, uphawu lwakho lwezodiac lunokuthetha ukuba ungomnye nje wabantu abangenathamsanqa xa kufikwa ekufumaneni uthando. Ngapha koko, ukuma kweeplanethi kwitshathi yakho yokuzalwa kuthetha lukhulu malunga nokuba unethamsanqa kangakanani na.
Kholwa okanye hayi, ukuba nethamsanqa eluthandweni kunokwenza a umahluko omkhulu kubudlelwane bakho kwaye inokuba yinto ebalulekileyo ekuqinisekiseni isiphelo sakho esonwabisayo. Ukuba ubuwedwa kangangexesha elithile, isibhakabhaka sinokuba nezinto ezininzi zokuphendula. Njengayo yonke into, enye yazo iimpawu zodiac inenqanaba elahlukileyo lempumelelo, kwaye oku kusebenza kubudlelwane kwakhona. Ke, mhlawumbi lixesha lokuba uyeke ukugxeka i-hang-ups kwaye uzame ukuqonda iimpazamo zakho.
Ngaba uphawu lwakho lwezodiac lunethamsanqa kubudlelwane?
Imiba ethile ebalulekileyo yeplanethi iya kubona abaninzi bethu bahlukana phakathi kothando nokugcina inkululeko yobuqu kulo nyaka, iipateni zentsingiselo zinokutshintsha. Uninzi lwethu luya kusokola ukuzibophelela kubudlelwane ngo-2021 kwaye sinokuzisola ngokhetho lwethu... Bekunokuthini ukuba bekungekuko ukuba nethamsanqa, kodwa ngakumbi ngokufumana umntu ube namandla ukuhambelana kwe-horoscope kunye?
Ngaba ujonge uthando lokwenyani kunye nolonwabo?
U-Aries akanalo kanye ithamsanqa eluthandweni
Abafunayo Aries ubuntu inokuba ncinci ukhethe kakhulu xa kuziwa ekuthandeni nasekukhetheni iqabane. Uthando aluze lubonakale luza kubo, abantu base-Aries bayafuna balwele into abayifunayo kwaye ekugqibeleni, baya kuyifumana.
I-Taurus idinga ukwazi oko bafuna kwangaphambili
Taurus ubuntu abantu abangoyiki ukuzibeka apho xa kuziwa ekufuneni uthando kunye nokuhlangana 'nalowo'. Nangona kunjalo, ukuba ngabahlobo bethu baseTaurus yehlisani umlindo wabo kakhulu kwaye bathathe izinto ngokukhawuleza, babeka umngcipheko wokwenzakala.
Ukuthandabuza kukaGemini kubenza babonakale beqalekisiwe
Yethu ubuntu Gemini abahlobo bahambelana kakhulu nabantu abakrelekrele nabacinga phambili. Ubume babo bokungakwazi ukwenza izigqibo kunye nokuthandabuza rhoqo ukuwa kobomi babo bothando.
Umhlaza uswele ithamsanqa eluthandweni
Abantu bomhlaza baziwa ngokuba novelwano kunye novelwano. Nangona, xa kufikwa uthando, Cancers ngamanye amaxesha alishwa kakhulu kwaye badla ngokuphuka iintliziyo kuba bathanda ngokulula kwaye bawa ngokukhawuleza.
U-Leo unelishwa kakhulu eluthandweni
Leo ubuntu abantu banokuba lishwa xa kuziwa eluthandweni. Banesisa kakhulu kwaye basoloko ufuna ukwenza ubudlelwane busebenze , nto leyo ethetha ukuba basenokuwela kumgibe wokwenza yonke imizamo kubudlelwane babo.
UVirgo unethamsanqa eluthandweni
Xa iVirgos ekugqibeleni ifumana umntu abaphambeneyo, ke izinto ziya kuhamba kakuhle kakhulu. Nangona, ubuntu Virgo abantu banokudlula kumaxesha anzima ukufumana umdlalo wabo ogqibeleleyo kuba bafuna kakhulu; zonke zimalunga nemfezeko.
Ukuthanda kakhulu umsebenzi kaLibra kuthetha ukuba soze bafumane mntu
ubuntu Libra abantu banjalo bezinikele kubomi babo bomsebenzi ukuba ungashiyi ixesha elininzi for ukuthandana nokufumana soulmate yabo, nto leyo ethetha ukuba basoloko bengasifumani isiqingatha sabo esigqibeleleyo.
UScorpio uqalekisiwe ngokunzulu
Eyakho umlinganiswa onomdla kunye nesibindi kunokuthetha ukuba awunathamsanqa eluthandweni, kuba masijongane nayo, ayinguye wonke umntu onokuphatha ubuntu bakho obumdaka. Ukufumana uthando akuyongxaki kuwe, kodwa ukugcina ubudlelwane obuzinzileyo yinto eyahlukileyo.
ISagittarius lolona phawu lunethamsanqa eluthandweni
Bayimiphefumlo ehambelana kakhulu, into ethetha ukuba babalasele ekulungiseni iingxaki kunye nokuthetha ngeemvakalelo zabo. Ubudlelwane obuzinzileyo zizinto zabo ezikhethekileyo.
I-Capricorn yingxowa edibeneyo yothando
Ubomi babo obunamandla buyakwazi ngamanye amaxesha tyhala amaqabane anokubakho kude . Nangona kunjalo, xa sele benobudlelwane, iiCapricorns zinika izinto zabo zonke kwaye aziyi kunikezela xa ukuhamba kuba nzima.
U-Aquarius unalo lonke ithamsanqa
I Aquarius ubuntu yi enye yeempawu zethamsanqa eluthandweni kwaye ukufumanise kulula ukudibana namaqabane, enkosi ngobuntu babo obubekekileyo kunye nobuhlobo. Kodwa, aba bantu bomthonyama kufuneka bakhumbule ukuba bangaphumli kakhulu, okanye banokuphela bebuhlungu.
IiPisces ngamanye amaxesha ziyaphoswa
IiPisceans ngokwemvelo abantu abaphuphayo kunye ne-ethereal , bahlala beneentloko zabo emafini kwaye bahlala kwi-utopia epheleleyo. Ngelishwa kubo, uthando alusoloko lugqibelele kwaye ukufumana iqabane eligqibeleleyo kunzima kunokuba livakala.
Ngaba unethamsanqa eluthandweni?
Cofa uphawu lwakho ukuze ufumane. Aries Taurus Gemini Umhlaza Leo Virgo Iponti I-Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius IiPisces
IKhalenda yeNyanga yowama-2021: Uqala nini uMjikelo weNyanga ngamnye?
Le miqondiso yeZodiac yenza abona bahlobo balungileyo ngokuhambelana nokuvumisa ngeenkwenkwezi